Nanoflares Gcina Izinto Ezishushu kwiLanga
Sayensi Inkqubo yesola
I-Nanoflares Gcina Izinto Ezishushu ngaphezu kwelanga
by UCarolyn Collins Petersen
Into enye sonke esazi ngayo ngeLanga: iyashisa ngokukhawuleza. Umphezulu (ungqongqo "ongaphandle" weSanga esikubonayo) ngu-10,340 degrees Fahrenheit (F), kwaye ingundoqo (esingayiboniyo) yi-27 MILLION degrees F. Kukho enye inxalenye yelanga elele phakathi phezulu kunye nathi: yindawo engaphezulu "," ebizwa ngokuba yi-corona.Izihlandlo ezingama-300 ezitshisa ngaphezu komhlaba. Into enokuyenza ibe kude nangaphandle kwendawo ingaba yitshisa njani?
Ubungacinga ukuba bekuya kupholisa kude ekude kuvela kwiLanga.
Lo mbuzo wendlela i-corona itshisa kakhulu ngayo igcinwe ixesha elide, ozama ukufumana impendulo. Kwakuye kwacingwa ukuba i-corona yatshisa kancane, kodwa imbangela yokufudumala yayiyimfihlelo.
Ilanga liyatshiswa ngaphakathi ngaphakathi kwinkqubo ebizwa ngokuthi i-fusion . Ingundoqo iyisithanezi senyukliya, i-atom ifom i- hydrogen ndawonye ukwenza iathothi ze- helium . Inkqubo inokukhupha ukushisa nokukhanya, okuhamba ngeendlela zeLanga kuze kube yilapho zibalekela kwiifoto. I-atmospheric, kuquka i-corona, ingaphezulu kwayo. Kumele kube lupholile, kodwa ayikho. Ngoko, yintoni eyayiyoyatshisa i-corona?
Impendulo enye i-nanoflares. Lawa amantombazana amancinci omlilo omkhulu welanga esiwafumana ukuqhuma kwi-Sun. Iifutha zikhawuleza ngokukhawuleza kwenyuka kwi-Sun. Bakhulula ubuninzi obukhulu bamandla kunye nemitha.
Maxa wambi ama-flares ahamba kunye nokukhishwa okukhulu kwe-plasma esuka kwi-Sun ebizwa ngokuba yi-coronal mass ejections. Ezi ziqhumane zingabangela oko kubizwa ngokuba "indawo yemozulu" (njengeziboniso zelanga ezisenyakatho nelasezantsi ) kuMhlaba kunye nezinye iiplanethi .
I-Nanoflares yintlobo ehlukeneyo yelanga.
Okokuqala, ziqhuma rhoqo, ziqhekeka kunye nezinye iibhomu ze-hydrogen ezingenakubalwa. Okwesibini, bashushu, benyuka ukuya kwizigidi eziyi-18 zeFahrenheit. Oku kushushu kunokuba i-corona, edlalwa ngamadridi angama-million. Cinga ngabo njengesobho eshushu kakhulu, ehamba phezu komphezulu wesitofu, ukufudumala umoya phezu kwayo. Nge-nanoflares, ukufudumala okuhlangeneyo kwazo zonke ezo ntshukumo ezincinci (ezinamandla ezinjenge-10-megaton hydrogen bomb explosion) mhlawumbi kutheni i-coronosphere ishushu.
Iingcamango ezingenanto ziyingqungquthela, kwaye nje kutshanje ziye zafunyanwa. Iingcamango ze-nanoflares zaqala ukucetyiswa ekuqaleni kwe-2000, kwaye zavavanywa ukususela ngo-2013 ngabalinganiswa beenkwenkwezi basebenzisa izixhobo ezizodwa kwii-rocket zomsindo. Ngethuba leenqwelo ezincinane, bafunda iLanga, befuna ubungqina bala maqabana amancinci (okuyi-bhiliyoni kuphela yamandla okutshatyalaliswa rhoqo). Ngoku kutshanje, i- NuSTAR , i-telescope yesikhala esicacile kwi- x-ray , ibukele ukukhutshwa kwe-ray ye-X kwaye ifumene ubungqina bokuba i-nanoflares.
Nangona i ngcamango engabonakaliyo ibonakala iyona nto ibonisa ukufudumeza kwe-coronal, i-astronomers kufuneka ifunde i-Sun ngakumbi ukuze iqonde indlela inkqubo isebenza ngayo.
Baya kujonga ilanga ngethuba elincinci "elincinane lelanga" -ukuthi i-Sun ingabonakali kunye ne-sunspots engakwazi ukudibanisa umfanekiso. Emva koko, i- NuSTAR kunye nezinye izixhobo ziya kukwazi ukufumana idatha engakumbi ukuze ichaze indlela izigidi zeentonga ezincinane eziphuma ngaphaya kwendawo yokukhanya kwelanga zinokutshisa umoya ophezulu ophezulu we-Sun.
Ukuzalwa Kwenyanga Yenyanga
Ngaba Sifanele Sakhe Isiseko Senyanga?
Iinyanga: Ziziphi na?
Iingcambu Xelela iNdaba yamaLwandle eMars
I-Sun Stormy-Connection Earth
Imifanekiso yoMhlaba Ukusuka Kwithuba Lendawo
Uhambo Ngendlela Yelanga: iPetet Neptune
Ukuhamba ngeSystem Solar System: Plan Plan Pluto
Ukuhamba ngeSomandla soMbane: i-Asteroids kunye ne-Asteroid Belt
Ihlabathi elitsha kwiNew Hori Hori ukuhlola
I-Texas A & M ye-University Corpus Christi Admissions
Umehluko phakathi kwebhayisi ye-Baking ne-Baking Powder
I-Double Coincidence of Wants
I-Top 10 Oldies ka-1960
UHenri Matisse: Ubomi Bakhe kunye noMsebenzi
Umprofeti uNuh (uNowa), iTyeya noMkhukula kwimfundiso yamaSilamsi
Ukugcoba i-Toasting: Ukubuyela kwiiNcwadi zamandulo
Ukusebenzisa iiNkcazo ezingacacile - Ukuzingca
Funda ngeNkqubo yeNerving System
Yoohoo! Ukufudumala kwethala
Uqeqesho loKwakha: 10 Iimfihlelo zoQeqesho zokwakha iMiscle Massive
Zonke Ngezilwanyana zezilwanyana
I-Illinois Wesleyan University Yamukelwa
Iingcebiso ezintlanu zeGosa
Imihla yeDurga Puja kunye noDusshera ngo-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, no-2022
Izinto Ezi-4 Ukuze Ukwazi Ngo-Oksana Chusovitina
Geography of Death Valley
Funda Okuthethwa YiBhayibhile NgamaTattoos
Kutheni usebenzisa i-PHP?
Ukuxhaswa Kwendlela Efanelekileyo Yokuxhasa Ukuphumelela Kweklasini
Ukukhangela kunye nokuthenga iJunior Skis
Iingcebiso zoPhicotho zoPhicotho
Uludwe lweePosi ezibulalayo
Ikhowudi yeKhalenda yamaYuda yeeholide 2015-16
Ngowe-1907 iBritish Ivulekileyo: I-Champ yokuqala yeFransi
U-Beannachadh Bealltain (I-Blessings yase-Beltane)